Fibonacci EA ၏ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်Fibonacci EA ၏
Fibonacci EA ၏ ပြုပြင်ထားသော Fibonacci မဟာဗျူဟာအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါဟာအားလုံးအချိန်ပြကွက်အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အနေအထားဖွင့်လှစ်ရန်နှစ်ရက်အကြာမှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည် (ဥပမာ: သင် H1 ဇယားပေါ်မှာတွဲလျှင်, ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ် 48 ဖယောင်းတိုင်ကိုအသုံးပြုသည်) ။
Fibonacci EA ၏ တစ်ဦးအချိန်ဇယားအပေါ်မူတည်မထားဘူး။ ဤသည်ကို EA သာ Fibonacci Retracement tools တွေကိုအသုံးပြုသည်။ ဤသည်ကြီးမားသောနှင့်အသေးစားမြို့တော်အဘို့ကြီးစွာသောကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်။ သငျသညျစမတ်ယူအမြတ်အစွန်းနှင့်စမတ်ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု (အော်တို TP & SL) ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ဇယားအပေါ် SL နှင့် TP အဆင့်ဆင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
အဆိုပါ EA ၏အပေါ်ထားရှိ anti-အရှုံး option ကိုနှစ်ခုမျိုးကွဲရှိပါတယ်: anti-အရှုံး 1 နှင့် anti-အရှုံး 2
ဥပမာ, anti-အရှုံး2EURUSD ကောင်းမွန်သည်။ သင့်ရဲ့အနေအထားဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပိတ်ထားသည်ဆိုပါက anti-အရှုံး2(အဘယ်သူမျှမစောင်ရန်း) စတင်ပါလိမ့်မည်။
Fibonacci EA - Input Parameters
——— <မဟာဗျူဟာ 1> ————
မဟာဗျူဟာ 1 ကိုသုံးပါ: False / True -> ဤသည်မှာအဓိကမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်
အော်တိုအမြတ် ယူ. : စစ်မှန်သော -> ဟုသတ်မှတ်လျှင် မမှန်သောသငျသညျပြောင်းလဲနိုင်သည် TP or SL ကိုယ်တိုင်ကို EA ပိုကောင်းအောင်
အော်တို Stop ပျောက်ဆုံးခြင်း: စစ်မှန်သော
အမြတ်ကိုယူ: 30 -> Auto Take Profit အတွက်လက်ဖြင့် - False
ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်: 30 -> Auto Stop Loss အတွက်လက်ဖြင့် - False
anti-ဆုံးရှုံးမှု 1: အယူမှား -> ဟုသတ်မှတ်လျှင် စစ်မှန်တဲ့တစ်ဦးအနေအထား (ထိုဆုံးရှုံးမှုကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူအပြိုင်ဖွင့်လှစ်သည်TP နှင့် SL Anti-ဆုံးရှုံးမှုအတွက်အဆင့်ဆင့်: ½ဆုံးရှုံးမှုကုန်သွယ်မှု stoploss = အသစ် SL နှင့်ဆန့်ကျင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် tp); ဥပမာ: ငါတို့သည် 30 pips (-30 pips) နှင့်အတူအချို့သောဆုံးရှုံးမှုကုန်သွယ်မှုရှိသည်။ anti-ဆုံးရှုံးမှု 15 pips နဲ့စတင်ပါလိမ့်မည် SL နှင့် TP
anti-ဆုံးရှုံးမှု 2: စစ်မှန်သော ဆုံးရှုံးမှုကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖွင့်လှစ် (TP နှင့် SL Anti-ဆုံးရှုံးမှုအတွက်အဆင့်ဆင့်: ဆုံးရှုံးမှုကုန်သွယ်မှု½ stoploss = အသစ် SL နှင့် TP ) Anti-ဆုံးရှုံးမှုအတွက်; ဥပမာ: ငါတို့သည် 30 pips (-30 pips) နှင့်အတူအချို့သောဆုံးရှုံးမှုကုန်သွယ်မှုရှိသည်။ anti-ဆုံးရှုံးမှု 15 pips နဲ့စတင်ပါလိမ့်မည် SL နှင့် TP
AL အော်တိုအမြတ် ယူ. : စစ်မှန်သော -> ဟုသတ်မှတ်လျှင် မမှန်သောသငျသညျပြောင်းလဲနိုင်သည် TP ကိုယ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်
AL အော်တို Stop ပျောက်ဆုံးခြင်း: စစ်မှန်သော -> ဟုသတ်မှတ်လျှင် မမှန်သောသငျသညျပြောင်းလဲနိုင်သည် SL ကိုယ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်
AL အမြတ်ကိုယူ: 30 -> Auto Take Profit: False အားဖြင့်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပါ။ (AL Auto Take Profit: False)
AL Stop ပျောက်ဆုံးခြင်း: 30 -> Auto Stop Los: False (AL Auto Stop Loss: False) အတွက်လက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပါ
——— <မဟာဗျူဟာ 2> ————
မဟာဗျူဟာ2ကိုသုံးပါ: False / True -> ၎င်းသည်ချိုးဖောက်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်
မက်စ်အမိန့်တစ်နေ့ Buy: 1 - နေ့တိုင်းဝယ်ရန်အများဆုံးအမှာစာ
တစ်နေ့မက်စ်အမိန့်ရောင်းချ: 1 - နေ့တိုင်းရောင်းရန်အများဆုံးအမှာစာ
——— <မဟာဗျူဟာ 3> ————
မဟာဗျူဟာ3ကိုသုံးပါ: False / True -> ၎င်းသည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုချိုးဖောက်သောမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည်ပုံသေအတွက်သင့်လျော်သည် လမ်းကြောင်းသစ် နေ့ရကျ
အော်တိုအမြတ်ကိုယူ: False / True -> သတ်မှတ်ထားပါက မမှန်သောသငျသညျပြောင်းလဲနိုင်သည် TP or SL ကို manually
အော်တို Stop ပျောက်ဆုံးခြင်း: False / True -> သတ်မှတ်ထားပါက မမှန်သောသငျသညျပြောင်းလဲနိုင်သည် TP or SL ကို manually
fixed လော -> အကယ်၍ (Risk% Lot) သတ်မှတ်ထားပါက မမှန်သော, သငျသညျကို manually အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်
စွန့်စားမှု% လောတ: အယူမှား / စစ်မှန်သော
ကုန်သွယ်ရေးအချိန် Filter ကို
ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်အချိန်: အယူမှား / စစ်မှန်သော
Start ကိုအချိန်: 00: 00
အဆုံးအချိန်: 23: 59
Fibonacci EA - ကောင်းကျိုးများ
backtests, သရုပ်ပြစမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှန်တကယ်စမ်းသပ်ခြင်းများအကြားအဘယ်သူမျှမခြားနားချက် (ရေရှည်ကုန်သွယ်မှု)
Fibonacci EA ၏ အပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ် EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY, USDCAD, AUDUSD နှင့် ရွှေ.
အခမဲ့ Fibonacci EA ၏ Download လုပ်
နယူး FxVoodoo EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အာမင် Asgari Hezaveh